कम्पनीले प्रस्ताव गरेको ४० प्रतिशत लाभांश रद्द भएको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नपाएपछि ४० प्रतिशत लाभांश रद्द भएको हो । कम्पनीले १८ प्रतिशत बोनस शेयर र २२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । लाभांशको लोभमा परेर शेयर किनेका शेयरधनी मारमा परेका छन् ।
आइतवार कम्पनीले लाभांश रद्द भएको सूचना जारी भएपछि कम्पनीको शेयरमूल्य ५० अंक घटेको थियो । यसबाट लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भएपछि मात्र शेयर किन्नुपर्ने पाठ सिकेको बताएका छन् । सोमवार कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ८ सय ८ मा खुला भएको छ । कारोबार अघिल्लो दिनको तुलनामा १७ अंक बढेर रू. ८ सय २५ मा बन्द भएको छ । कम्पनीको १ वर्षको उच्च मूल्य रू. १ हजार ९९ र न्यून मूल्य ७ सय ९० रहेको छ ।
खरीद चाप : कम्पनीको सोमवार भएको शेयर कारोबारमा अन्तिम समयसम्म विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप बढी छ । सो अवधिसम्म १४ हजार ३ सय २९ कित्ता शेयर खरीद र ६ हजार ५ सय ८६ सय कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
2019-01-08 - 231 view(s) - abhiyan